Mexico Mexico amaliteghachi ihe omume ndị njem nleta mgbe Ajọ Ifufe Zeta gasịrị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mexico Mexico amaliteghachi ihe omume ndị njem nleta mgbe Ajọ Ifufe Zeta gasịrị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Nyaahụ, n'ihe dị ka elekere 11 nke ehihie - oge mpaghara - Ajọ Ifufe "Zeta" mere ọdịda na Quintana Roo, na-abanye na Chemuyil, na obodo Tulum.
Gọvanọ Carlos Joaquín kọrọ na ruo mgbe elekere 11 nke ụtụtụ enweghị nnukwu mmebi ma ọ bụ ọnwụ anwụ na steeti. Otú ọ dị, n’ime awa ndị na-esote oké mmiri ozuzo na ifufe siri ike ga-aga n’ihu, yana oke ebili mmiri na ebili mmiri, ya mere, osimiri ga-anọgide na-emechi taa, a na-arịọ ndị bi na ndị ọbịa ka ha ghara ịga nso oké osimiri ahụ ruo mgbe ọ ga-agbakeghachi ogo ya.
Nyere na ajọ ifufe ahụ bụ Atiya 1 wee mebie ajọ ifufe, ndị njem anaghị achọ ịhapụ ụlọ oriri na nkwari akụ ha na ọdụ ụgbọ elu nke steeti na-arụ ọrụ; Ọrụ ndị ọrụ steeti na ndị ọrụ nlegharị anya alọtala ugbu a.
N'ime ngwụsị izu, Gọọmentị nke Steeti nke Quintana Roo, na-arụ ọrụ na Ngalaba Nchedo Obodo na CONAGUA, tinyere usoro iwu gọọmentị na usoro mgbochi dị mkpa iji chebe ọdịmma nke ndị bi na ndị ọbịa niile.
Ọ dị mkpa icheta na ndị njem niile na steeti (ndị obodo na ndị mba ọzọ) nwere ike ibudata ngwa "Guest Assist" (dị na iOS na gam akporo) iji rịọ ụdị enyemaka ma ọ bụ ozi ọ bụla n'oge ọnọdụ ndị dị otú a.
A na-agwa ndị bi na ndị ọbịa ka ha kpachara anya dị mkpa, pụọ n'oké osimiri ruo mgbe ọkwa mmiri ya kwụsiri ike, ma soro ntuziaka na ndụmọdụ nke State Civil Protection na Gọọmentị nke Steeti nke Quintana Roo.
The Quintana Roo njem njem ga-aga n'ihu nyochaa ọnọdụ ahụ ma nye mmelite na ozi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, Gọọmentị Steeti niile na ụlọ ọrụ ndị njem na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-echekwa ahụike ọha na eze ka bụ ihe kacha mkpa.